Accueil > Gazetin'ny nosy > Tontolon’ny serasera: Nodimandry i Tsilavina Ralaindimby
Tontolon’ny serasera: Nodimandry i Tsilavina Ralaindimby
Banga iray indray ny laharan’ny olon’ny serasera Malagasy satria nodimandry omaly teo amin’ny faha-72 taonany i Tsilavina Ralaindimby. Tsy zoviana eo amin’izany tontolon’ny serasera izany izy satria taorian’ny nandrantoany fianarana sy fiofanana tany Frantsa tany amin’ny taona 1967-69 tany dia isan’ny teknisiana nampihodina ny fahitalavi-pirenena (Tvm) ny lehilahy. Sady mpamokatra fandaharana no mpanolotra ary mpan,entana fandaharana izy, izay saika nanasongadinany ireo karazana kolotsaina tany amin’ny faritra maro teto Madagasikara.
Nanana talenta manokana koa teo amin’ny sehatry ny famoronan-kira izy satria azo tsiahivina fa maro tamin’ireo hira nampahalaza ny mpanan-kanto tamin’ny taona 70 teo amin’ny bahan-kira “vakisaova” toy ny an’ny Jomak’Ampamarinana, no i Tsilavina Ralaindimby no namorona ny tonon-kirany. Nisahana ny tontolon’ny fifandraisana koa izy nandritra ny fotoana nandraisan’i Madagasikara ny lalaon’ny Nosy tamin’ny taona 1990.
Mpikatroka tao anivon’ny antoko Mfm rahateo izy tamin’izany fotoana.
Taty amin’ny taona 1993 dia niara-dia tao amin’ilay fikambanana “Maha-olona’ i Tsilavina Ralaindimby mbamin-dry Dama Mahaleo, ry Belanto, Niry Ravelojaona, Sammy Rabenirainy, Elie Rajaonarison sy ny maro, ary nahatafiditra solombavambahoaka tao anatin’ny Antenimierampirenena tamin’izany ny “Maha-Olona” ka i Dama Mahaleo no nitarika ny lisitra ary lany depioten’Antananarivo Renivohitra. Voatendry ho Minisitry ny kolotsaina sy ny serasera (Mks) tao amin’ny governemanta Ravony i Tsilavina Ralaindimby tamin’izany (1993-1995). Isan’ny nanandratra avo ny lanjan’ny kolotsaina isam-paritra teto Madagasikara i Tsilavina Ralaindimby nandritra ny naha-minisitra azy.
Taorian’izay dia nisahana asa teo anivon’ny tontolon’ny serasera hatrany izy ary niandraikitra orin’asa mpanao fanadihadiana sy fandrafetana tetik’asa (bureau d’études – consultant).
Amin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao dia nalain’ny filohampirenena hisahana ny antokon-draharaha (direction) eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika (directeur de la communication) i Tsilavina Ralaindimby.
Very manam-pahaizana iray amin’ny tontolon’ny serasera sy mpisehatra amin’ny fanandratana ny kolotsaina Malagasy i Madagasikara ankehitriny.
Izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile dia maneho ny fiaraha-miory amin’ny fianakaviany ary mankarey azy ireo amin’izao fisarahana an-tany izao.
Mandria ampiadanana “Rain’Tsy”